Nkume na-ehicha Systerm --lọ ọrụ dị ọcha - China Stone Mmezi Clean Systerm Manufacturers, Suppliers
Polishing Wax- Bellinwax
Bellinwax nkume polishing wax bụ a pụrụ iche ìhè echebe wax, ọ mere ka elu ìhè na-enwu na longtime.Can polishing marble na konkiri, adabara ọ bụla nkume.
PAG Yellow polishing ntụ ntụ (5 Extra)
Extra polishing powder 5 maka eke polishing mgbe sanding marble, nkume, travertine, palladium na grit floor. Ihe mgbakwunye 5 ọzọ abụghị naanị na-enye ìhè dị na mbara ala na-enweghị ike ịmepụta fim, na-enye marble ihe na-egbukepụ egbukepụ, kamakwa ọ na-eme ka ihe ndị na-adịghị emetụta ya na mmiri na unyi, na-eme ka nhicha dị mfe.
Yellow na-egbu ntụ ntụ -YP
The ọhụrụ mabul ọzọ alkali na unyi, polishing ntụ ntụ na-mere nke iche iche nke acid, ọ nwere ike na-ekere òkè acid na alkali neutralization na ihicha, na-eme ka elu na-enwu ma dị ọcha. Ọzọkwa mma gloss maka ogbenye marble mgbe-egweri.
MR2 bụ ngwaahịa na-ewu ewu marble maka ndozi-ịkpụ na ndozi kwa ụbọchị nke ala. Ha nwere ike imezi ngwa ngwa elu elu ma mee ka ikpo ọkụ dị n'elu elu.
MR3 bụ ngwaahịa nlekọta na-arụ ọrụ siri ike nke ejiri mee ihe maka ịchacha na ịkpụcha marble. Ọ nwere ike ngwa ngwa weghachi marble elu gloss, melite elu njupụta na-eyi ndị na-eguzogide. Jiri MR3 mgbe niile iji debe ala marble na-enyere aka rụzie nsị n'ụzọ dị elu na elu marble, weghachite elu elu ma melite nghọta.
MR5 bụ ngwaahịa nkwalite ala marble iji kwalite maka ịkọgharị ma ọ bụ ịchachasị okwute marble. Ọ nwere ike ịmezi nsị a kpụrụ akpụ n'elu marble site na iyi, weghachi ma ọ bụ melite gloss elu.
ONE Nzọụkwụ Crystallizer ịgba N 'BUFF -2501
2501 bụ kpochapụwo kristalizer si NCL, e mepụtara ka ọ dị mfe iji mweghachi usoro maka mabul, terrazzo na polishing limestone ala. Crystallizer Ngba N 'BUFF na-arụpụta ezigbo polish. Ọhụrụ eweghachiri elu ga-eguzogide scuffs na ọkọ. Igwe a weghachiri eweghachi ga-adịgide adịgide. Crystallizer raygba N 'BUFF dries ka ị buff na Ya mere na-achọ dịghị imetosi ihe ọcha-elu.
Crystallizer maka marble na terrazzo ala -AGUILA CR-2
CR-2 - Sealer-crystallizer maka marble na terrazzo ala na-enye ọkwa dị elu nke na-adịgide adịgide ma na-eguzogide ọgwụ, na-eme ka ala ahụ kaa akara ma chebe ya ogologo oge.